EGO LEGO MEGA IGBO LEGO - Gbado anya na onye na-agba ọkụ na-akpụ akpụ isi ọkụ ọkụ igwe eji emeputa ihe akụrụngwa
Otu otu R&D ya
20 afọ nke ahụmịhe.
12 ọnwa ngwaahịa
akwụkwọ ikike maka n'efu
24 awa izu-ere
mmeghachi omume nzaghachi
48 awa na-anwale
ỌR BUILDING ỌR.
Karịa 14 Afọ nke Ahụmịhe
Kemgbe 2006, MEGA abụwo ọkachamara n'ịgba ọkụ ọkụ, ọkụ ụlọ na ihe owuwu ọkụ ụlọ. Anyị na-enye ọrụ OEM & ODM, yana esi edozi ọkachamara maka ọkwa gị ma ọ bụ ihe omume gị.
Produkpụrụ Mbịpụta International
Ngwaahịa niile bụ CE & RoHS asambodo. Kpee ISO:9001 njikwa mma na GB / IEC ọkọlọtọ.
Oge Ndu Ibere
8 mgbakọ na ule ahịrị, ya na onwa obula 50,000 nkeji. Productsfọdụ ngwaahịa ndị a ma ama dị na ngwaahịa, oge idu agha agaghị abụ echere.
Hapụ anyị ozi biko, anyị ga-azaghachi n'ime 24 awa site na email
Febụwarị 24, 2020
No.48 Fengshen Avenue, Mpaghara Huadu, Obodo Guangzhou, Guangdong Province, China